I-Evergreen Outlook 🍃 Iimbono + Ilinen + inobubele kwisilwanyana sasekhaya
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguAshleigh
Indlu yaselwandle enesitayile esihle enembono phezu kwefama yobisi kunye neendunduma zesanti. Ibekwe kwindawo yoku-1 yeVenus Bay, le ndlu intle yaselunxwemeni ihamba umgama ukuya kwiivenkile zaseVenus Bay kunye nolwandle olujikelezayo 1.
Le ndlu intle yaselwandle ineembono ezimangalisayo zeVenus Bay ibandakanya amagumbi okulala ama-3, amagumbi okuhlambela ayi-2, ikhitshi elikhulu, igumbi lokuhlala kunye nelokutyela kunye neendawo ezi-2 ezinkulu zokuzonwabisa zangaphandle.
Iindawo ezimbini zokuzonwabisa zangaphandle, indawo engaphambili izihlalo ezisi-9 ezinomlilo wangaphandle kunye nemibono etshayelweyo yefama yobisi yaseVenus Bay kunye neefama zomoya, ngelixa indawo efihlakeleyo engasemva eneendawo zeBBQ ilungele ukonwabisa kunye nezibane ezikhazimlayo ngokuhlwa. Igumbi lokuphumla libonisa izihlalo ezitofotofo kunye ne-air conditioning kunye nomlilo oqaqambileyo ngeengokuhlwa zasebusika, kwaye ikhitshi inombono oya kuthatha umoya wakho uquka ii-oveni ze-x2 kunye nazo zonke izinto eziluncedo, kubandakanywa indawo yokutyela ehlala 8. Ngamagumbi okulala ama-3. lala abantu abasi-8, inkosi ibandakanya iimbono zefama ezimangalisayo kunye ne-en-suite, kunye negumbi labantwana linebhedi yanamhlanje yabantu abadala ebandakanya enye, kabini kunye ne-trundle kunye ne-TV. Amagumbi okuhlambela amabini anebhafu kunye nempahla enomatshini wokuhlamba kunye nowomisa.
Le ndlu itofotofo, ye-chic beach inako konke-imibono, iindawo zokuzonwabisa, kufutshane neevenkile kunye nolwandle.
Izibonelelo zokuzonwabisa ziquka imidlalo yebhodi, iibhayinotyhulasi, iincwadi, iiTV kunye nokunye okuninzi.
Kubandakanya amashiti, izinto zokulala, iitawuli, ukuvasa izandla kunye nezinto eziluncedo zasekhitshini.
4.65 · Izimvo eziyi-56
Yonwabela indawo engqonge ulwandle iVenus Bay eneelwandle ezintlanu zokusefa ongakhetha kuzo kunye neelwandle ezikhuselweyo kunye nepaki engaselunxwemeni yeCape Liptrap. Yiva amanzi asendle kunye nesanti yegolide yonxweme lwase-Gippsland e-Venus Bay, indawo encinci yokuhlala kwiindunduma zentlabathi ezinezityalo. Idolophu inabemi abamalunga nama-500, kodwa inokunyukela kumawaka njengoko abaloli, ii-surfers kunye neentsapho zidibana ngexesha leholide.
Ukuhamba nje ngaphandle kwedolophu ukuya kwiilwandle ezintlanu ezigqwesileyo ze-surf ezigadwa ngabagcini bokuphila kwi-surf kwiinyanga zasehlotyeni. Fumana ulwandle olukhuselekileyo, olukhuselweyo olulungele ukuqubha kwelona hlabathi lide lesanti yokutshicela eAnderson Inlet.
Yenza indlela yakho ecaleni konxweme ukusuka eVenus Bay ukuya eCape Liptrap ukuze ufumane ithuba lokutyelela indlu yesibane endala kwaye ufumane izityalo zaseOstreliya.
Amanzi azolileyo eAnderson Inlet ayenza ibe yeyona ndawo ifanelekileyo yokukhwela amaphenyane kunye nokuloba. Phuma kwaye ujonge indawo yokungena eyandisa yonke indlela ukusuka e-Inverloch ukuya emlonyeni woMlambo iTarwin kwaye uphose umgca weflathead, isalmon, i-talor, i-whiteing kunye ne-trevally.